जाडो बढ्दो छ, तराईमा शीतलहर उस्तै छ । साथमा धन, पैसा हुनेले आफैँ न्यानो कपडा, खाना, छाना जोड्लान् । आफ्नो बुताले जाडो थेग्न नसक्ने परिवारलाई हिउँदको जाडो सधैँ कहालीलाग्दो हुन्छ ।
वर्षे विपत्ले बल्लबल्ल धानिएको ढुङ्गा, खर र टिनको छानामा चिसो शीत र हिउँले जब हिर्काउन थाल्छ । मुटुमै जाडो गढ्छ । यस्तोमा कसलाई भन्ने ?
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले भने, “जाडो भयो भने सरकारलाई भन्नूस्, जससँग केही हुँदैन उसका लागि सरकार छ ।” जाडो भएर कठ्याङ्ग्रिएर कोही छरछिमेकमा बसेको देखेमा समुदायले उसका लागि पहल गरिदिन उनले आग्रह गरे ।
उनका अनुसार देशका ७५३ स्थानीय सरकारले जाडो होस् अन्य विपत् जनताको जिउधन जोगाउने जिम्मा लिएको छ । सरकारले भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, असिनापानी, हुरीबतास, चट्याङ, शीतलहर, हिमपातलगायतका विपत्का कारणबाट भएका पीडितलाई राहत सहयोग दिँदै आएको छ ।
मार्गदर्शनले शीतलहर, हिमपात, हिमआँधीका कारण हुनसक्ने विपत्का घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गरी जनधनको क्षति कम गर्न पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको प्राथमिकता दिएको छ ।
सबै निकायको भूमिकासँगै उसले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य पनि मार्गदर्शनले तय गरेको छ ।जसअनुसार जाडो यामका लागि दाउरा, न्यानो कम्बल, लत्ता कपडा आदि जिन्सी राहतको व्यवस्था हरेक वर्ष तराईका लागि गरिँदै आएको जनाइएको छ । हुने खाने र पढेलेखेका समुदायले हुँदा खाने र नहुनेका लागि गरिदिने समय यस्तै प्राकृतिक विपत्का बेला भएकाले सघाउन पनि प्राधिकरणले अपिल गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा चाँदनी हमालले खबर लेखेकी छन् ।
सङ्क्रमण मुक्त भएपछि मात्र काममा फर्किन निर्देशन